Ibhulakufesi iphilile: amaqanda ngiyocasha ubisi
U-Adalberto isikhathi eside eFrance yasungulwa isidlo esimnandi - ngiyocasha amaqanda nobisi. Lapha kuba into futhi kusisiza ekuseni uma ufuna ukudla kwasekuseni masinyane. Naphezu kweqiniso lokuthi Omelette ilula, zikhona ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama kule.
A omelet Classic ubisi
Ukuze udale le abavamile kakhulu futhi izitsha ezihlwabusayo kudingeka amaqanda 3, spoon lobisi, spoon ibhotela kanye nosawoti. I amaqanda aluhlaza ngobugebengu engeza ubisi kanye nosawoti. Konke lokhu kahle ngesiswebhu nge mixer noma ekuphambukeni. kamuva kuphela epanini evuthayo, ngamafutha ngaphambili, kuthululwe mass. Yonke into ethosiwe phezu ukushisa eliphezulu. Uma Omelette sikhula, kungaletha etafuleni. By endleleni, kuyinto enhle, uma isidlo ukuhlobisa amahlumela ngesikele sokuthena elincane amakhambi elimnandi (dill, cilantro, parsley, basil).
Indlela apheke omelet okuphuma phambili nge imifino kanye ayi
E-Fulansi, lapho abangaphezu kuka-60 ongakhetha ngoba kukhona ukupheka omelet. Kungenzeka ngisho utshwala. Ngokumangalisayo okunempilo kungaba nguye okulungiswa ne ukwengeza isoseji nemifino. Ukwakha ke kuyodingeka 2 izinja ashisayo noma isoseji, anyanisi, utamatisi, amaqanda 4, isigamu inkomishi yobisi, namafutha amancane zemifino, baking soda, usawoti, amakhambi kanye pepper.
Amaqanda endishini kubalulekile Shake up ngemfoloko. Lokhu kuzokuvumela ukuba uthole i-oksijini eyanele futhi avuke phakathi ukubhaka. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ungeze pepper, usawoti, ubisi, soda (ngokoqobo phusha). Konke ixubene, ukuze uthole isisindo ingqikithi.
Eceleni comminuted onion engena pan lapho amafutha yemifino okugazingiwe. Ukuze khothama wathumela isoseji noma ayi, pre-lisikiwe. Utamatisi, oqoshiwe, sithulule anyanisi kanye namasoseji namaminithi 3 ngosile yonke le ngxube. Khona-ke ingxube isoseji-yemifino kuthululwe Iqanda mass, futhi umlilo wabeka esiphansi. Omelette ukumboza ngesivalo bese uqalisa ibila kuze liphuma khona. Ngakho kumelwe aqhubeke imizuzu 10-15.
Uma nenqwaba phezulu omelet zapechetsya usulungile. Kuyadingeka ukuba agqoke ipuleti amahle flat. Ngenxa umhlobiso kanye side dish encane efanelekayo yemifino slicing noma ukhukhamba.
Omelette French ubisi
ungakwazi kalula ukudala i dish soqobo. Into esemqoka - ukuba zonke izithako adingekayo. Kufanele ukulungiselela Isiqu amalikhi, zemifino uwoyela spoon iphawundi uphizi oluhlaza (kungenzeka fresh noma eqandisiwe), amanzi, usawoti, pepper, ulethisi, 200 of inyama ngibhema ukhilimu spoon, ukugaya oluhlaza, isipuni esigcwele elincane ibhotela, 100 g kafulawa amaqanda 8, ngisho nengxenye ingilazi yobisi kanye ghee.
Kufanele uqale ukulungiselela lo ukugxusha. Ukuze wenze lokhu, usike anyanisi emasongweni amancane gazinga in ibhotela. Ukuze ngithululele uphizi, usawoti, pepper, engeza amanzi bese uqalisa ibila. Kuthatha cishe imizuzu engu-10. Salad ngibhema inyama Imi emapheshana futhi ungeze pan imifino. Endaweni ehlukile, uhlanganise ukhilimu omuncu, ufulawa kancane nokhezo kancane imifino oqoshiwe. Konke lokhu uhumusha imifino, ivaliwe khava alethwe ngamathumba, futhi sivuleka emaphethelweni ipuleti isuswe, ukuze ngingasebenzisi kudambe.
Ekugcineni, usukulungele ukupheka Omelette. Izikhupha ukuhlanganisa ubisi usawoti. Ngosizo ngemfoloko, isiswebhu noma mixer zonke ngesiswebhu. Ufulawa sifted bese yengezwa nalapha. amaprotheni ababezihlukanisile ophehliwe futhi wafaka ku isisindo ingqikithi. On ghee wabhaka 4 omelet kule ngxube okuholela. Ngamunye wabo languishing epanini avaliwe, futhi sebedlulisela isidlo. Kumi esiqongweni sezindawo omelet ukubeka ukugxusha kanye uwasonge.
On the "ukugxusha" empeleni kube yimuphi omunye, ngisho inyama.
Omelette aluhlaza kakhulu
Ngokuvamile, ngiyocasha amaqanda nobisi okuphekiwe epanini ukuthosa. Nokho, uma ephekwe eziko, ngeke bavuke eliphezulu ngokwedlulele futhi kuyoba umhlobiso wangempela etafuleni. Ukuqalisa leresiphi kuzodinga ingilazi yobisi, amaqanda 5, ibhotela kancane, ushizi, anyanisi, izinongo eziyisisekelo.
ubisi ngesiswebhu futhi amaqanda, bona engeza oqoshiwe onion, pepper, usawoti noshizi ogayiwe. Amafutha nivame elinefomu esikhethekile ukubhaka, lapho wathela zonke mass ubisi-amaqanda. Kuyinto efiselekayo ukuthi ingxube ithatha akukho ngaphezu wesithathu umthamo, ngoba sihlelwe ukuthi Omelette kuyinto aluhlaza kakhulu futhi kahle avuke kuhhavini. Cishe 30 imizuzu kuyadingeka ukuze kuhhavini uzilungiselele futhi sijabulele lesi omelet okumnandi, okungase fed wafafaza esivulekile carnations.
Isinkwa Darnytskiy ku umenzi isinkwa: ukwakheka kanye kadokotela. Indlela ukupheka isinkwa isinkwa umenzi Darnitsky?
Omelette Delicious - iresiphi kuhhavini.
Sudak: izinhlanzi iresiphi
Indlela ukuhlobisa ikhekhe ekhaya?
Uyalondoloza E200 - siyini lesi ibhekwa?
"Green Street hooligans". Abalingisi Characters
Ukholifulawa: a ikhalori ongaphakeme, Umbuso indawo okusezingeni eliphezulu
Instruments kwenqubomgomo yemali
Australia: imithombo yemvelo kanye nokusetshenziswa yabo
Ingcindezi olungaphelele emoyeni nemiphumela yayo umzimba womuntu